Nahoana i Twitter nanohana ny #EndSARS ao Nigeria fa tsy nanohana ny #FixTheCountry ao Ghana? · Global Voices teny Malagasy
Ny firaisa-monim-pirenena no tokony hiaro ny fahalalaham-pitenenana anjotra
Voadika ny 12 Oktobra 2021 4:10 GMT
Accra Central, Accra, Ghana. Sarin'i Muntaka Chasant ary navoaka ho an'ny Wikimedia commons, 14 Janoary 2019, (CC BY-SA 4.0).
Tao Nigeria, rehefa tsy nanaiky ny fangatahan'ny governemanta ny orinasa media sosialy, niditra hanao ny maodelim-pitondrana tsirefesimandidy ny governemanta hamerana ny firotsahana mahaolompirenena sy demaokratika amin'ny politikam-bahoaka (fomba fandaminana ny raharaham-bahoaka).
Rehefa tafiditra ny maodelim-pifehezana tsirefesimandidy, dia misy ireo orinasa media sosialy no miankohoka na mifahatra. Nisafidy ny hiankohoka i Twitter — rehefa miatrika ny famoretan'ny governemanta amin'ny fanehoan-kevitra anjotra tao Ghana sy Nigeria — amin'ny tranga iray fa nisafidy ny hifahatra amin'ny tranga iray hafa. Mbola afa-miaro ny zo ankihy sy ny fahalalahana miteny eto Afrika ve i Twitter?
Nitongilana i Twitter amin'ny politikan'i Nigeria
Nahatonga tsy fitiavan'ny governemantan'ny Filoha Buhari ilay orinasa media sosialy ny fanapahan-kevitr'i Jack Dorsey naka fironana tamin'ny politikan'i Nigeria. Nandritra ny hetsi-panoherana #EndSARS tao Nigeria, nisioka i Dorsey ho fanohanana ilay hetsi-panoherana ary niantso ny vahoaka hanao rakitra ho fampitsaharana ny herisetran'ny polisy amin'ny Nizeriana. Nomen'ny Twitter tanjaka bebe kokoa ny farangoteny #EndSARS, ka nahatratra mpisera an-tapitrisany.
VAKIO BEBE KOKOA: Pejy manokana Global Voices — #EndSARS: A youth movement to end police brutality in Nigeria
Tao Ghana, nisy hetsika tsy mitongilana amin'antoko mitovitovy amin'izany ihany koa nampiasa ny farangoteny #FixTheCountry. Nasongadin'ny hetsika ireo fanamby atrehan'ny tanora Ghaneana, ao anatin'izany ny haavon'ny tsy fananana asa, ny firongatry ny kolikoly, ary ny herisetran'ny miaramila amin'ny mpikatroka sy mpanao fihetsiketsehana.
Tamin'ny 3 mey 2021, tanora iray mahasarika ao amin'ny media sosialy, Joshua Boye-Doe, nisioka ny loniloniny, nampiasa ny farangoteny #FixTheCountry, miresaka ireo tanora manana diplaoma tsy mahazo asa rehefa nahavita fianarana taona maro tany an-tsekoly.
Rehefa [nahafeno ny] NSS [National Service Scheme], maro ny olona fantatro, mbola ao an-trano satria tsy mety mahazo asa…
Nanana ny akony tamin'ireo tanora Ghaneana tao amin'ny Twitter ny siokany ary niafara tamin'ny ezaka voarindra hanao fihetsiketseham-panoherana tao an-drenivohitra Accra. Nosakanan'ny Ghana Police izany ezaka izany sy didy avy ao amin'ny Fitsarana Tampony ao Ghana.
Nisioka ho an'i Dorsey ny tanora Ghaneana, mitaky ny fanohanany ny hetsika #FixTheCountry protest tahaka ny nanohanany ny #EndSARS, saingy samy tsy nisy namaly na ny Twitter na i Dorsey. Ny hita aza dia niantona ny kaonty Twitter an'ilay nanomboka ny farangoteny fa ny farangoteny notohanan'ny governemanta #FixYourself no nalaza tao amin'ny sehatra.
Nahoana ny Twitter navitrika ara-politika amin'ny #EndSARS ao Nigeria fa tsy amin'ny #FixTheCountry ao Ghana
Polisy manakona ny hetsika #OccupyFlagStaffHouse #OccupyGhana taona 2014. Sary avy amin'i Dieu-Donné Gameli, navoaka ho an'ny Wikimedia Commons, 1 Jolay 2014 (CC BY-SA 3.0).
Mihoatra ny 200 tapitrisa ny isan'ny mponina ao Nigeria, raha latsaky ny 40 tapitrisa kosa ny mponina ao Ghana. Bitika ny fandraisan'i Ghana anjara amin'ny fampivelarana ny isan'ny mpisera Twitter manerantany. Nigeria, anefa etsy andanin'izany no manana ny isan'ny mpisera Twitter betsaka indrindra eto Afrika, ary manodidina ny telo tapitrisa no mavitrika isam-bolana. Raha mitolona mafy i Twitter manangana fifandraisana tsara amin'ny governemanta nizeriana ahafahana miditra amin'ny tsena lehibe indrindra eto Afrika, ny mahasolo izany dia ny mamela ny olompirenena [mpisera] ho latsa-pitia amin'i Twitter.
Ny fanapahan-kevitry ny Twitter, araka ny navoaka ao amin'ny blogpost-n'ny orinasa hanangana birao tao Ghana dia mifototra amin'ny toeran'ny firenena ho “tompondakan'ny demaokrasia, mpanohana ny fahalalaham-pitenenana, fahafahana anjotra, ary ny aterineto misokatra.” Nisara-kevitra tamin'ny Twitter, tsy tahaka ny nifanarahany tamin'ny Facebook i Nigeria, izay manana tsena goavana noho i Ghana, fa tsy azoazon'ny governemanta Buhari loatra, izay nanakana ilay sehatra tamin'ny jona.
Tsy hita taratra amin'ny resaka zon'olombelona anefa i Ghana, ka tsy afa-manazava feno ny antony nifidianan'ny Twitter io firenena io hametrahana birao manoloana an'i Nigeria. Ao Ghana, anaovana fikasihan-tanana na vonoina ho faty noho ny fanoherana na noho ny fitenenana mamely ny governemanta ny mpanao gazety sy ny mpikatroka izay tsy inona fa fanitsakitsahana ny fahalalaham-pitenenany. Lavin'ny filohan'i Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, sy ny mpanao lalàna ampahibemaso ny hanaja ny zon'olombelona avy amin'ny vondrona vitsy an'isa, ao anatin'izany ny fiarovana ny zon'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ ao Ghana. Ny Parlemantan'i Ghana, tarihan'ny Mpitondratenin'ny Parlemanta, amin'izao fotoana izao dia eo am-pananganana lalàna manameloka bevava ny ataon'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ.
Na dia tsy mazava aza ny antony, ny hetsika ataon'ny Twitter dia ahafahana mihevitra fa tsy te-hiditra ao anatin'ny raharaha politika ao Ghana tahaka izay ataony ao Nigeria izy, eny fa na dia midika ho tsy fiarovana ny zo ankihin'olompirenena aza izany. Manampy izany, ny fitoerana ao Ghana dia miaro ny Twitter tsy ho tratran'ny politika an-tondromolotry ny governemanta Nizeriana, miaraka amin'ny fahasarotana amin'ny tontolom-pihariana. Manampy izany, mbola ahafahan'ny Twitter miditra amin'ny tsena nizeriana sy ny fahaiza-manaony manokana ihany ny fananganana toeram-pihaonana afrikana ao Ghana.
Tsy maintsy miasa miaraka ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena hiarovana ny fahalalaham-pitenenana
Ao anaty ady ara-pitsarana ifanaovana amin'ny governemanta nizeriana ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena mba hanesorana ny fanapahan-kevitra hampiato ny Twitter, izay nampiasaina ho habaka fanabeazana maha-olompirenena hirotsahana amin'ny fifampiresahana. Ny fitoriana vao haingana tao amin'ny Fitsaran'ny Vondrona Ara-Toekarenan'ny Fanjakana Afrikana Andrefana (ECOWAS=CEDEAO) napetraky ny Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP_Tetikasan-tamberin'andraikitra sy ny Zo ara-Piarahamonina sy Toekarena) no namaritra fa tsy afa-misambotra na mitsara izay olona na orinasa midify amin'ny fanakanana i Nigeria. Fanondroana ity raharaha ity fa afa-mivondrona ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena ary mijoro ho tsanganana iray matanjaka hihazona ny Twitter sy ny governemanta ho samy tompon'andraikitra amin'ny fanajana ny zo ankihin'ny olompirenena sy hiantoka ny aterineto misokatra ao Afrika Andrefana.
Nilaza i Twitter fa (nanatona) ny governemanta nizeriana “hanana fifampiresahana misokatra hamahana olana iraisana sy hijerena izay hamerenana amin'ny laoniny ny servisy.” Ny governemanta naneho ny fahavononany hifampiresaka amin'i Twitter.
Misy fifandroritam-pahaiza-mitondratena ihany ny maodelim-piharian'ny orinasa media sosialy amin'ny famelana ny Twitter ho tokana mifampiraharaha amin'ny governemanta amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fidirana amin'ny sehatra sy ny fahalalaham-pitenenana ao Nigeria. Raha efa mitsinjo mialoha ny orinasa media sosialy ny hanary mpisera betsaka noho ny politikam-pamerana ajadon'ny governemanta, dia ho ataon-dry zareo izay ifanarahana amin'ny governemanta izay mety hamotika ny zo ankihin'ny mpisera an-dry zareo.
Taorian'ny fihaonana nifanaovan'ny Twitter sy ny governemantan'i Nigeria handravonana ny tsi-fitovian-kevitry ry zareo, nilaza ny mpitondratenin'ny governemanta fa nifanaiky tamin'i Twitter ry zareo amin'ny lafiny sasany, ka ao anatin'izany ny fifanekena amin'ny Twitter ny hananganana birao ao Nigeria amin'ny taona 2022. Mety ho paikadin'ny governemanta io hamoretana ny zo ankihin'ny olompirenena satria ny fananana birao ao an-toerana dia mahatonga ny mpiasan'ny Twitter ho ambanin'ny lalàna ao an-toerana. Nisy fangatahana toy izany natao tamin'ny Twitter tany India mba ahafahan'ny governemanta mora mifandray amin'ny ekipa ao an-toerana azon-dry zareo hazonina ho tompon'andraikitra amin'izay zava-mitranga.
Any India, firenena iray izay kitro ifaharan'ny paikadim-pivelaran'ny Twitter manerantany, tsy afa-nifahatra manoloana ny fangatahan'ny governemanta Indiana hanaisotra kaonty (mpisera) ny orisana media sosialy. Notanterahan'ny Twitter ny fitakiana maro nataon'ny governemanta hampiato ao anaty fotoana tsy manam-pahataperana kaonty tokony ho 500 sy sioka mitsikera ny governemanta.
Saingy tsy Twitter ihany no tompon'antoka.
Efa ao amin'ny tantaran'ny Facebook mihitsy ny firaisana tsikombakomba fampanginana ireo mpikatroky ny zon'olombelona. Nobahanana sy nomarihan'ny Facebook ny votoaty #EndSARS ho “vaovao lainga.” Tsy mahagaga izany, noho ny fanamafisan'ny Facebook ny fifandraisany amin'ny governemanta Nizeriana hifehezana ny tsena Nizeriana, taorian'ny fitsidihana faharoa nataon'i Mark Zuckerberg tao Nigeria hihaona amin'ny Filoha Buhari.
Rehefa nampiditra fepetra henjana kokoa ny Governemantan'i Nigeria — andiam-pitsipika media sosialy vaovao mitaky amin'ny orinasa media sosialy hisoratra anarana ao Nigeria — dia halemy ny fiarovan'ny Twitter hisian'ny aterineto misokatra sy ny fahalalaham-pitenenana ao Nigeria.
Raha tian'ny vondrom-piraisamonim-pirenena ao Nigeria ny hahazo antoka fa tsy hanitsakitsaka ny zon'olombelon'ny Nizeriana ny fifampiraharahan'ny governemanta sy ny Twitter, dia mila miara-miasa ry zareo, ary manangana fanohanana ara-politika amin'ny fotokevitry ry zareo. Mila ihany koa ry zareo manolotra vahaolana tsara kokoa, mampiasa ny lalàna mipetraka hiarovana ny zon'ny olompirenena.